Ndị na-emepụta ọgwụ - China Medical Factory & suppliers
Nlekọta enyemaka enyemaka ahụike Medical
✭ Companylọ ọrụ anyị nwere ahụmịhe dị n'ọhịa nke ebu ebu maka ndị na-ahụ maka ọgwụ. Ọ bụghị naanị na ịkpụzi ebu, kamakwa ịkpụzi ọgwụ na ịkpụzi ọgwụ. Ihe plastik ejiri na catheter ọgwụ a dị oke ọnụ ma chọọkwa oke ebu. Oghere dị n'ime ngwaahịa ahụ bụ naanị 1.27mm na dayameta. Ihe ntinye anyị bụ nke SKH51 ihe dị elu. Ihe a nwere ike hụ na ndidi nke obere oghere ma hụ na ọrụ ndụ nke ntinye pin.
✭ Ngwongwo plastik nke catheter a bụ ihe dị nro 65-ogo. N'oge ogwu ịkpụzi usoro, ọ na-esi ike demold. Site na nkwalite nke teknụzụ anyị, nrụpụta akpụzi anyị ugbu a na-adị ire ụtọ na usoro ịgba ọgwụ ahụ dị mkpụmkpụ. Ugbu a, anyị ọgwụ ịkpụzi okirikiri bụ 16 sekọnd, nke na-azọpụta nnyefe oge na-eri ndị ahịa anyị.
✭ Anyị set nke Ebu ka nke S136 obi tara mmiri, na ndụ nke ebu kwesịrị iru 1 nde ugboro. Na usoro ịkpụzi ọgwụ na-akpụzi, ọ dị mkpa iji hụ na ngwaahịa ahụ ziri ezi, ma hụ na ọ kwụsiri ike ma sie ike n'oge usoro mgbakọ.
✭ Daysbọchị 7 * igbe ọgwụ nchekwa 7 nchekwa igbe 49 nke igbe ọgwụ nwere ike igbo mkpa gị kwa ụbọchị ọbụlagodi mgbe ị na-eme njem.Egwurugwu na agba kwa ụbọchị na-akara iche iche na mkpuchi nke mere na ị nwere ike mfe ịmata ihe dị iche na ihe ị chọrọ.Ihe siri ike na nke na-adịgide adịgide na-ekpuchi ihe mkpuchi plastik ga-anọgidesi ike ma ọ bụrụhaala na ị na-emechi ya ma gharakwa imeghe. E nweghị ọgwụ gbasasịa na ihe mberede ma ọ bụ mmetụta.Ọdịdị ọdịdị pụrụ iche dị iche iche na-azọpụta ohere, n'adịghị ka igbe igbe mkpụrụ akụkụ akụkụ anọ ọzọ, nke nwere ike ijide obere ngwa.
✭ Dịka ọmụmaatụ, Pill CUTTER.Onu ogugu 22.5 x 6 X 27 cm Obere igbe obula dika 1,66 sentimita asatọ * 0,23 sentimita asatọ 0,86 cm.
Nke a plastic akụkụ bụ akụkụ nke a Oil nzacha Plastic ccessories si a USA ahịa. Mdị Ebu a na-agbaso ụkpụrụ DME. Ihe bụ isi bụ nchara siri ike S136.
✭ Ọkpụkpụ ebu ahụ dịtụ mfe, ya na ihe nrụnye abụọ Becu. Ngwaahịa ngwaahịa bụ eyi, na elu kwesịrị Polish- # 600. Ọnụ ọgụgụ zuru oke nke ngwaahịa achọrọ bụ +/- 0.1. Oge nnyefe ebu bụ ụbọchị 35, na usoro ntanye bụ 35 sekọnd. A na-anwale ebu ahụ naanị ugboro abụọ, onye ahịa ahụ wee gwa anyị ka anyị hazie mbupụ na ụlọ ọrụ ịkpụzi ọgwụ na USA.
✭ Mgbe n'ichepụta injection-akpụzi akụkụ si plastik, ebu okpomọkụ nwere bụrụkwa mmetụta na àgwà nke akụkụ na okirikiri oge. Nchịkwa kachasị mma n'oge nhazi nke thermoplastics ya mere nwekwara mmetụta mmetụta na arụmọrụ nke mmepụta ahụ.
✭ Ọkpụkpụ ebu na-cyclically kpụ ọkụ n'ọnụ site na ihe agbara. A na-ekpochapu ọkụ site na nkwanye ọkụ na ngwongwo na nchara nke ebu na elu nke ọwa akara okpomọkụ, ebe a na-enye ọkụ site na mbufe ọkụ na-agagharị na-ekpo ọkụ ọkụ na-ekesa (mmiri ma ọ bụ mmanụ). Igwe na-achịkwa ọnọdụ okpomọkụ na-ekpochapu ọkụ nke ọkụ ọkụ ọkụ ma weghachite onye na-ajụ oyi na mgbasa.
✭ Anyị set nke Ebu ka nke S136 obi tara mmiri, na ndụ nke ebu kwesịrị iru 1 nde ugboro. Na usoro ịkpụzi ọgwụ na-akpụzi, ọ dị mkpa iji hụ na ngwaahịa ahụ ziri ezi, ma hụ na ọ kwụsiri ike ma sie ike n'oge usoro mgbakọ. Mee ka akụkụ eletrọniki anyị kwụsie ike.